CBD uye Chirwere cheshuga - Kudzoreredza Ropa Shuga | Zvakanakisa mu2020
CBD uye Chirwere cheshuga - Uchishandisa CBD Oiri Kudzosera Ropa Shuga | Chigadzirwa chakanakisa 2021
CBD Uye Chirwere cheshuga: Uchishandisa CBD Oiri Kudzosera Ropa Shuga
Iyo cannabinoid system inoenderana neshuga yeropa
CBD uye chirwere cheshuga: Ruregerero rwechirwere cheshuga neCBD
Sayenzi yanga ichitsvaga cannabinoids zvine chekuita nekurapa zviratidzo nezvikonzero zvechirwere cheshuga. Kuchengetedza yakaenzana homeostatic system inoita kunge ndiyo kiyi yekurapa kutsva kwechirwere ichi zvichibva pamakemikari eSanabis Sativa. Kunyangwe pasina mushonga parizvino, zvimwe zvezviratidzo zvacho zvinogona kuderedzwa nemaruva ehemp uye zvigadzirwa.
Chirwere cheshuga seti yezvirwere zvemagetsi zvinokonzerwa nekutadza kwemuviri kudzora huwandu hweshuga, kunyanya glucose, muropa. Mazinga eglucose anotariswa nemahormone senge insulin, iyo inogadzirwa mupancreas. Chirwere cheshuga chinogona kukonzera kukanganisika kwenguva refu, senge chirwere chemoyo, sitiroko, kana kukuvara kwetsvo nemeso.
Mumakore achangopfuura, kuwanda uye ongororo kuri kusimbisa humbowo hweanecdotal hwakapihwa vane chirwere cheshuga uye vachiratidza izvozvo CBD mafuta ine zvinobatsira. Iwo anti-anogumbura zvivakwa zveCBD uye zvakare THC, inoderedza arterial kuzvimba, chiratidzo chakajairika cheshuga, nepo iyo neuroprotective mhedzisiro inoderedza tsinga kuzvimba uye kurwadziwa.
Cannabinoids inoshandawo sevasodilator, iyo inovandudza kutenderera kweropa uye inoita antispasmodic basa pamhasuru uye nemudumbu. Iyo isina zororo makumbo syndrome inokonzerwa nechirwere cheshuga inogona zvakare kudzikiswa necannabis, ichiita kuti varwere varare zviri nani. Ongororo dzechangobva kuitika murabhoritari dzakaratidza kuti iyo endocannabinoid system inogona kuve nemabasa ekudzikamisa huwandu hweshuga yeropa, rinova iro dambudziko hombe rechirwere ichi. Nehurombo, iwo angori marabhoritari ekutsvaga; parizvino hapana cannabinoid-yakavakirwa kurapa kwechirwere cheshuga.
Kunyangwe kiriniki yekutsvagisa nevanhu ichidikanwa, zviongorori zvema laboratori zvakaratidza kuti pane kuwirirana kwakasimba pakati peshuga uye cannabinoids. Zvakangodaro, zvimwe zvidzidzo zvinoratidza kukanganiswa kweiyo endocannabinoid system pane chirwere cheshuga yakaitwa, uye vasvika pamhedziso senge cannabidiol inoderedza kuitika kwechirwere cheshuga mune mbeva dzeshuga dzisina kufutisa. Zvinoenderana nedzimwe ongororo, CBD inodzivirira uye kunonoka insulitis inoparadza uye kugadzirwa kweanopisa cytokines, zvichikonzera kushomeka kwechirwere cheshuga.
Vamwe vaongorori vanotaurawo nezve inogona kuitika immune-modulatory mashandiro ayo anoshandiswa neCDD. Iyi fungidziro inosimbiswa nezvimwe zvakawanikwa nezve cannabidiol uye neongororo yakawana mamwe maitiro europrotective eCDD mune yekuyedza modhi yeshuga. Kumwe kutsvagurudza kwakawanawo kuti CBD inodzivirira kusagadzikana kwemoyo mumakonzo ane chirwere cheshuga chirwere chemoyo.
Kunze kwemarabhoritari uye mukati memba yeaine chirwere cheshuga, tinowana ese marudzi eumbowo humbowo hwekuti cannabinoids inoshanda pakurapa maziso eziso, kurwadziwa kusingaperi, kusagadzikana kwekurara, uye zvimwe zvirwere zvinosangana nechirwere cheshuga. Kurapwa kunoitwa chirwere cheshuga kunoenderana nekuti vane mamwe matambudziko uye hutano hwavo. Vamwe varwere vanowedzera avo cannabinoid ekurapa.
Kana iwe uri mushandisi weCBD uye chirwere cheshuga, iwe unofanirwa kuziva izvo zvinogona kukuchidzira kudya kwako pakutanga, asi nekufamba kwenguva, ine zvinopesana uye zvinogona kudzivirira kubva kufutisa. Cannabis inotora neakasiyana zviyero zveTHC, CBD, uye mamwe ma cannabinoid uye terpenes, kana kungori CBD chete, zvinofungidzirwa kuti zvinobatsira kune hutano pamwe nehutano hwemwoyo.
Izvi zvakafanana cannabis kana hemp zvakaburitswa zvinogona kushandiswa kugadzirira misoro yemafuta anodzora marwadzo europathiki ayo anowanzo kuve nechirwere cheshuga. Kune rimwe divi, njodzi inogona kuitika yekuti iwe unoratidzwa kune mushandisi weCBD uye chirwere cheshuga ndeye hypoglycemia, sezvo zvichityirwa kuti mwero weglucose unodonha pasina murwere achizviziva kusvika zvave kunonoka.
Mhando dzese dzekurovedza muviri dzinoitwa nguva nenguva, pamwe nekudya kune hutano uye kwakaringana kunodzora njodzi yeshuga uye kunoshanda kudzora huwandu hweshuga yeropa revanhu vane chirwere ichi. Vanorwara nechirwere cheshuga vanofanira zvakare kuenzanisa kana kurega doro uye kushandisa fodya.
pashurePrevious mumhanyi;Ndeapi mabhenefiti eCDD?NextNext mumhanyi;Chii chinonzi CBD Mafuta? | Chigadzirwa chakanakira 2021